Inona no ho hitanao ao Sorrento | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita ao Sorrento
Sorrento dia ao amin'ny tanàna malalaky ny tanàna avy any Naples, ao amin'ny faritra Campania. Tanàna italianina be mpizaha tany izy io, eo akaikin'i Naples sy Pompeii. Tanàna kely azo tsidihina ao anatin'ny iray andro monja.
La Tanànan'i Sorrento manolotra izay antenaina rehetra amin'ny zoron'ny Mediteraneana izy io. Tanàna mahafinaritra taloha, sakafo nentin-drazana, seranan-tsambo ary torapasika mahafinaritra. Atorinay anao ny zorony rehetra izay azo zahana ao Sorrento manan-tantara.
1 Tanànan'i Sorrento
2 Mandehandeha mamaky ny afovoan-tantara
4 Villa Comunale Park
5 Katedraly Sorrento na Duomo
6 Cloister an'i San Francisco
7 Correale Museum of Terranova
8 Basilica an'ny san antonio
Kely ity tanàna ity, saingy manana tantara lehibe. Toa ny niandohan'ny anarany dia avy amin'ny lovantsofin'ireo zazavavindrano, izay nahasarika ny mpanjono tamin'ny hiran'izy ireo. Tombanana fa ny niandohan'ity tanàna ity ny teny grika, ary ny sisa tavela amin'ny farantsakely hita dia nanondro fa mponina ara-barotra tokoa izy io, izay nifandray nanerana an'i Mediterane. Ny ivon-toerana manan-tantara dia mbola manana ny lamina taloha hatramin'ny vanim-potoana romana.
Ny tanànan'i Sorrento dia 50 kilometatra miala an'i Naples. Azo atao koa ny mankany avy any Roma miaraka amina bus, amin'ny lamasinina ary afaka mampiasa fitaterana an-dranomasina mihitsy aza ianao. Ny tsipika Circumvesuviana dia ampiasaina hahatratra ity tanàna ity amin'ny lamasinina, izay ny fitaterana be mpampiasa indrindra satria io no ahazoana aina indrindra.
Mandehandeha mamaky ny afovoan-tantara
Ny afovoan-tanànan'i Sorrento dia iray amin'ireo toerana manintona indrindra. Mbola misy ny layout taloha an'ny villa romana. Manomboka eo amin'ny kianja Torquato Tasso ianao handehanana mamakivaky ny arabe ety sy labyrintinina. Ity Plaza Tasso ity dia manana terrasika tsara tarehy izay manome fahitana ny hadilanana. Iray amin'ireo arabe malaza indrindra ao aminy ny Corso Italia, izay ahitanao ireo karazana bara, trano fisakafoanana ary fivarotana rehetra, eo akaiky eo koa misy lalana iray ahitanao ny zava-pisotro misy alikaola antsoina hoe limoncello. Ny traikefa tsara indrindra dia ny famelana ny tenanao ho entina mahita zorony sy arabe manokana feno olona. Azontsika atao koa ny mahafantatra ny tanàna tena misy an'i Sorrento tsikelikely. Ankoatr'izay, satria tsy dia lehibe loatra izy io dia afaka mahita azy io ao anatin'ny iray andro monja.
Ity toerana ity dia seranan-tsambo mpizahatany ao an-tanànan'i Sorrento ary iray amin'ireo toerana fitsidihany mpizahatany. Avy amin'ity toerana ity ianao dia afaka mandray sambo mankany amin'ny toerana tsara tarehy toa an'i Coast Amalfi na ny nosy Capri. Any anaty cove tsara tarehy no misy azy ary tena akaikin'ny Plaza Tasso, noho izany dia hitantsika ao anatin'ny fotoana fohy ny zava-drehetra.
Ity zaridaina kely ity hita eo akaikin'i Piazza Tasso Izy io dia iray amin'ireo toerana manintona indrindra eto an-tanàna, iray amin'ireo toerana izay mendrika fakana sary marobe, miaraka amin'ny fomba fijery manome fomba fijery mahafinaritra. Ao amin'ity valan-javaboary kely ity dia hahita ascenseur koa isika izay hitondra antsika mivantana any amin'ny Marina Piccola raha mila mandeha sambo isika, manao fitsidihana mahazatra ny tanàna.
Katedraly Sorrento na Duomo
Matetika ny tanàna italiana rehetra dia manana Duomo na Katedraly. Ilay ao Sorrento dia miorina eo afovoany manan-tantara ary nandalo fanavaozana maro nandritra ny taonjato maro. Izy io dia natsangana tamin'ny fomba Romanesque tamin'ny taonjato faha-XNUMX, na dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX aza ny facade. Ny atitany dia amin'ny endrika Baroque sy Neo-Gothic, miaraka amina sanganasa manan-tantara manan-danja. Ny lakolosiny dia misy famantaranandro seramika tsara tarehy.
Cloister an'i San Francisco
Ity vatam-paty ity dia namboarin'i Frera Fransiskanina tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Izy io dia jiro iray izay manolotra fangaro amin'ny endrika maritrano samy hafa ary koa voahodidin'ny voninkazo sy zavamaniry manome azy io ho tena malefaka sy tantaram-pitiavana. Io no toerana mety indrindra hitadiavana fitoniana kely, na dia mandritra ny volana fahavaratra aza dia misy fihaonambe na fampirantiana ao. Azo antoka fa toerana mendrika jerena noho ny hatsarany.
Ny trano misy ity tranombakoka ity dia ny fonenan'ny fianakavian'ny Correale teo aloha, tompon'ny Newfoundland. Momba an'io tranombakoka lehibe izany dia azo jerena ao an-tanànan'i Sorrento. Ao anatin'ny tranombakoka ianao dia afaka mahita taolam-biby arkeolojika tamin'ny andro grika sy romana ary zavatra taloha sasany hatramin'ny taonjato lasa. Azonao atao koa ny mahita vera Venetiana sasany ary koa sanganasan'ilay mpanakanto Tasso izay manome ny anarany any amin'ny kianjan'ny tanàna.
Basilica an'ny san antonio
Nanomboka io basilica io manangana amin'ny taonjato fahiraika ambin'ny folo ary eo akaikin'ny Cloister of San Francisco izy io. Amin'ity basilica ity dia afaka mahita singa amin'ny fomba samihafa ianao. Eto no misy ny sisa tavela amin'i Saint Antoninus, izay mpiaro ny tanànan'i Sorrento. Amin'ny maha-te hahafanta-javatra anao dia tsy maintsy fantatrao fa misy taolana trozona sasany eo am-baravarana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Inona no ho hita ao Sorrento
Inona no ho hita any Seville ao anatin'ny roa andro
Trafalgar Square, tsy maintsy atao any Londres